Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks]
1 Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 24th June 2010, 10:49 am
ဒီပို့စ်ကို C0D3R ရေးဖူးတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ထပ်ရေးလိုက်ပါ့မယ်။ ပုံစံမတူဖူးလို့ထင်လို့ပါ။
ဆိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Login ၀င်ဖို့အတွက်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် username & Password ရိုက်ပြီး Sigin / Login မနှိပ်ပါနဲ့ဦး။ URL Bar မှာ ဒီကုဒ်လေးကိုကူးထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Go လုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဘာသာပဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
2 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 26th June 2010, 8:35 am
Admin ရေ ဘာမှမပေါ်ဘူးဗျ
စမ်းကြည့်တာ ကျနေ်ာပဲ မှားနေလားမသိဘူး
3 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 26th June 2010, 5:39 pm
ET wrote: Admin ရေ ဘာမှမပေါ်ဘူးဗျ
ရပါတယ်ဗျာ။ သူပြောတာကို သေချာဖတ်ပြီးပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦး။
4 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 26th June 2010, 6:06 pm
ဟုတ်ပါပြီ ကျနေ်ာ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ဦးမယ်
5 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 18th October 2010, 5:14 am
အမှားကြီး ရိုက်ထဲ့လိုက်လဲ အမှားအတိုင်းကြီးပေါ်တာဘဲ
6 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 18th October 2010, 11:15 am
7 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 4th November 2010, 12:18 am
ko htoo htoo
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-11-03
အနော်လဲ ရဘူးဂျ ... ရှင်းပြပါဦး
8 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 4th November 2010, 6:43 pm
ရေးထားတာကို သေချာအရင်ဖတ်ပြီးမှ လုပ်ကြည့်ပါ
P.W မေ့မှာဆိုးလို့ သေချာအောင် ပြန်ကြည့်ခိုင်းတာ..
9 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 22nd July 2011, 11:54 am
ရပါတယ် ရေးထားတဲ့ ပက်ဝက်ပဲပေါ်မှာပေါ့ ဟုတ်တယ်နော်
10 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 2nd September 2011, 12:45 pm
11 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks] on 2nd September 2011, 9:11 pm
saikaungset wrote: အဲဟာကဘာအတွက်သုံးရတာလဲဗျ။
ဒါကဘာအတှကျအသုံးဝငျလဲဆိုတာ ကနြျော ဥပမာတခုပွပွီးရှငျးပွပါမယျ...
Look up my pic:. It is the admin panel that i 've break in. (kind of Joomla site)
see the red-circle that i've made. It is the FTP Username, FTP password.
FTP username & password is important for site construction ( which is also known File transfer portocaol ) . [You must be registered and logged in to see this link.] you can upload and download your site pages by using FTP client remotely //
Look closely the FTP password. You can see password in dot charcter like this ( ●●●●●●●●●●●●●●●● ) . So how can you know what the password is ??????? hum...
Copy/paste .. hum... can't see that dot. form.
အောကျကပုံကိုဆကျကွညျ့ပါ .. i've locate my mouse pointer & .. see that .. what is this
●●●●●●●●●●●●●●●● = waa1026611142743
ဒါကကနြျော Show my password 2.0 plugin သုံးထားလို့ မွငျရတာပါ သဘောတရားကတော့အတူတူပါပဲ ..
ကို z3r0c00l ပွထားတာက အဲ့လို password တှကေို java-code နဲ့ browser ထဲထညျ့ပွီးမွငျရအောငျလုပျတာပါ..
ကနြျောက တော့ browser plugin သုံးထားတာပါ ..သဘောတရားအတူတူပဲဖွဈပါတယျ..
12 Re: Website ပေါ်က Password ကိုကြည့်မယ်။ [Tips & Tricks]